ဝဘ်ဒီဇိုင်း Martech Zone
ဝဘ်ဒီဇိုင်း - အဲဒါမင်းအကြောင်းမဟုတ်ဘူး
ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 23, 2009 တနင်္လာနေ့, ဇွန်လ 2, 2014 Jon အာနိုး
၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲရန်ပြင်ဆင်နေပါသလား။ ထိုရှုပ်ထွေးနေသော်လည်းအရေးကြီးသည့်ဆော့ဖ်ဝဲ application ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ သင်မ ၀ င်မီ၊ အရည်အသွေး၏နောက်ဆုံးအနုပညာသည်သင်မဟုတ်ဘဲသင်၏အသုံးပြုသူများဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ သင်မည်သည့်အဖိုးတန်သောပရိုဂရမ်ဒေါ်လာကိုမဆိုအသုံးမပြုမီသူတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အပြုအမူများကိုပိုမိုနားလည်ရန်အတွက်အနည်းငယ်သောခြေလှမ်းများဖြစ်သည်။
ကဲ့သို့သောမည်သည့်အရေအတွက်အချက်အလက်နှင့်မဆိုစတင်ပါ analytics, သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများအဘယ်သို့ (သို့မဟုတ်မဟုတ်) လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ရှိသည်။ အပိုဆောင်းထိုးထွင်းသိမြင်မှုအတွက်သင်နှစ်သက်သောအရာနှင့်မည်သည့်အရာများကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်ကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုရန်လက်ရှိ site သို့မဟုတ် software ကိုအသုံးပြုသူကိုစမ်းသပ်နိုင်သည်။ လက်ရှိနှင့်အမြဲတမ်းအသုံးပြုသူပြissuesနာများကိုလေ့လာရန်အရောင်းသို့မဟုတ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုရှိလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ပြောဆိုပါ။ ဒီသုတေသနဒေတာတစ်နေရာရာမှာအစီရင်ခံစာထဲမှာရှိပြီးသားရင်တောင်စကားပြောဖို့အချိန်လုပ်ပါ။ စာနာမှုသည်လူတို့နှင့်အမှန်တကယ်စကားပြောဆိုမှုမှဖြစ်ပေါ်လာသည် တုတ်ကျင်းထဲမှာ သုံးစွဲသူဗဟိုပြုဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်သင့်အားသဘာဝအရသင့်အားကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
တကယ်တော့ဒါလုပ်ပါ ရှေ့ပြေးပုံစံ (အများကိန်း) မည်သူမျှပထမ ဦး ဆုံးကြိုးစားမှုအပေါ်ပြီးပြည့်စုံသောရှေ့ပြေးပုံစံကိုဖန်တီး။ သို့သော်ထိုအရာမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်၊ စျေးပေါပြီးမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှတည်ဆောက်ခြင်းသည်ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းတစ်ခုနှင့်ပိုနီးကပ်လာသည်ကိုသိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် HTML သို့မဟုတ် Flash ဖြင့်ထိရောက်သောရှေ့ပြေးပုံစံကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်၊ သို့သော် Acrobat, Powerpoint နှင့်စက္ကူနှင့်ခဲတံပင်လျှင်သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုမြင်သာထင်သာရှိသောပုံစံသို့ရရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောကိရိယာများဖြစ်နေသေးသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင်သင်၏အတွေးအမြင်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာဆက်သွယ်ပြောဆို၊ အကဲဖြတ်နိုင်၊ စစ်ဆေးနိုင်သည်။ စမ်းသပ်ခြင်း၏စကားပြော?
အသုံးပြုသူကိုစမ်းသပ်ခြင်းအကြောင်းအချို့စဉ်းစားသောအခါသူတို့ကအဖြူရောင်ဓာတ်ခွဲခန်းအင်္ကျီများနှင့်ကတ်ထူပြားများမြင်ယောင်လာသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်လူများစွာသည်နှောင့်နှေးမှုများနှင့်အပိုကုန်ကျမှုများကိုစိတ်ကူးနေကြသည်။ ဤသည်နှင့်လုံးဝအသုံးပြုသူစမ်းသပ်ခြင်းအကြားရွေးချယ်ဖို့အတင်းအကျပ်အခါ, အများဆုံးနောက်ပိုင်းတွင်ရွေးချယ်ပါ။ အရှက်ကွဲခြင်းအတွက်! အသေးစားစီမံကိန်းများသို့မဟုတ်ဆိုးရွားပြင်းထန်သောသတ်မှတ်ထားသောနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ရှိပါကပြောက်ကျားချဉ်းကပ်နည်းကိုသုံးပါ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၆ ဦး မှ ၁၀ ဦး၊ မိဘများ၊ အိမ်ထောင်ဖက်များ၊ အိမ်နီးချင်းများ (ကူညီလိုသူမည်သူမဆို) ကိုရှာပြီးအရေးအကြီးဆုံးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုကိုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုတစ် ဦး ချင်းစီလေ့လာပါ။ မင်းရဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံပေါ်မှာ။ ဤသည်ကသင့်အားထိုးထွင်းသိမြင်မှု (သို့) ပုံမှန်အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်စစ်ဆေးခြင်းမှပေးသောစိတ်ကူးယဉ်အစီရင်ခံစာများအားလုံးကိုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းလူတစ် ဦး တည်းကိုပင်စမ်းသပ်ခြင်းသည်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှစမ်းသပ်ခြင်းထက် ၁၀၀% ပိုကောင်းသည်။ ရလာဒ်များသည်သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေနိုင်သည်သို့မဟုတ်စိတ်ပျက်စေနိုင်သည်၊ သို့သော်ဤအရာများကိုစီမံကိန်းမဟုတ်သည့်နောက်တွင်ထက်ယခု ပို၍ သိရန်ပိုကောင်းသည်။
ငါတို့လူသားတွေဟာတောက်ပပြီးလှပတဲ့အရာတွေလိုအမှန်ပဲ။ နည်းပညာတွင်လှပသောဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောမျက်နှာပြင်များသည်ဒီဇိုင်းမဟုတ်သောအရာများထက်အသုံးပြုရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်ဟုမှတ်ယူသည်။ သို့သော်သင်၏စီမံကိန်းသည်အလှမယ်ပြိုင်ပွဲဖြစ်သင့်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဂူးဂဲလ်ရဲ့ဖန်သားပြင်ဒီဇိုင်းကကြွယ်ဝတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့အသေးစိတ်အသွင်ပြောင်းအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်အခြားအခြေအနေတစ်ခုတွင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော်လည်းရှာဖွေရေးမျက်နှာပြင်တွင်အပြည့်အ ၀ စိတ်အညစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဂူးဂဲလ်အတွက်နှင့်အခြားသူများအတွက်တော့အမ်ားဆုံး လှသောအဆင်း မျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်းကိုမကြာခဏအရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စီမံကိန်းအသစ်တစ်ခုအပေါ်လျင်မြန်စွာဖိအားပေးမှုကိုကောင်းစွာသိရှိကြသည် အလုပ်ရ တစ်ခုခုတည်ဆောက်ခြင်း။ သုံးစွဲသူသုတေသန၊ ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့်အသုံးပြုသူစမ်းသပ်ခြင်းစသည့်အဆင့်များသည်ဘတ်ဂျက်နှင့်အချိန်ဇယားတင်းကျပ်သောအခါပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများဖြစ်သည့်အတွက်ကံဆိုးသည်။ အမြီးအမောက်ဒီမကြာခဏလိမ့်မည် ကယ်ဆယ် ရေရှည်တွင်အချိန်နှင့်ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီးနောက်ဆုံးတွင်သင့်အားသတိမထားမိဘဲပိုမိုကောင်းမွန်သောပုံပန်းသဏ္ဌာန်ရှိသောအလုပ်မလုပ်ဘဲပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်သင့်အားတားဆီးထားသည်။
Tags: ပုံစံအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုအသုံးပြုသူ interface ကိုဒီဇိုင်းuxweb design မှာ
Jon Arnold သည် Tuitive ကိုတည်ထောင်သူနှင့်သမ္မတဖြစ်သည် အသုံးပြုသူ interface ကိုဒီဇိုင်း ဝဘ်နှင့်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများကိုအသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည့်ကုမ္ပဏီ (နှင့်အလွန်ကြည့်ကောင်းသည်!)
WordPress - Sidebar တွင်စာရေးသူသတင်းအချက်အလက်ထည့်သွင်းပါ
23:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 41
23:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 35
Dougy မဟုတ်ဘူး! ဤစာမူကိုကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်း Jon Arnold မှ Tuitive မှရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးသုံးစွဲသူများ၏အတွေ့အကြုံကိုအမြင့်ဆုံးသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော web ဒီဇိုင်းများကိုတည်ဆောက်ရန်အထူးပြုသည့်မြို့ရှိစိတ်ကူးအေဂျင်စီဖြစ်သည်။
24:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 54
24:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 3, 16
Dave လုပ်ပြီးပြီ။ :) ကျွန်ုပ်၏ Verizon ကြိုးမဲ့ BlackBerry မှပေးပို့သည်
မှ: IntenseDebate အသိပေးချက်များ